Kismaayo News » Kheyre oo faro marnaan kasoo laabtay Adis Ababa
Kheyre oo faro marnaan kasoo laabtay Adis Ababa
Kn: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kaddib markii safar qaatay saddex cisho uu ku tagay magaalada Addis Ababa, halkaasoo uga qeyb galay shir madaxeedkii Midowga Afrika.
Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ee dib ugu soo laabtay Muqdisho ayaa waxaa ka mid ahaa Wasiirka Arrimaha Dibadda Yuusuf Garaad, Xildhibaano ka tirsan labada gole.
Ra’iisul Wasaaraha oo la filayay in diyaarada ay la soo raacaan qaar ka mid ah Maxaabiistii laga sii daayay Xabsiyada Itoobiya ayaa la sheegay in arrimo farsamo ay dib uga dhaceen, isla markaana ay sii deyntooda wali ka dhiman yihiin howlo yar.
Wararka ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay u diri doonto maalmaha soo socda diyaarad qaas ah, si loogu soo qaado, iyadoo dhameystirka barnaamijka sii deynta maxaabiista iyo howsha soo daabulida loo xilsaaray Safaaradda Soomaaliya ee Addis Ababa.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray intii uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa, in dowladda Itoobiya ku soo wareejisay illaa 120 maxaabiis Soomaali ah oo laga sii daayay xabsiyada dalkaas, hase ahaatee maxaabiista ayaa badankood ku xiran xabsi ku yaalla magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.